Islaam Naceybkii Iimaamka Noqday | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan, February 1, 2016
Maxamuud Axmed Muuse — November 12, 2019
Waxay ahayd qiso aad ucajiiba oo ka yaabisay dad badan kadib nin gaal ah oo udhashay waddanka Maraykanka oo ku caan baxay islaam nacaybka uu noqday Muslim.
Waxaa la sheegaa ninka la dhaho Mac Mckinney in uu ka tirsanaa ciidanka badda ee Maraykanka . Waxa uu ka howl gali jiray Afgaanistaan, waxa uu ahaa xagjir aad uneceb diinta islaamka isla markaana ahaa mid neceb qofka sheegta islaam. Intii uu askariga ahaa waxa uu laayay malaayiin muslim ah, qeyb uu qarxiyay, qaar uu laayay iyo qaar ka badbaaday bay isugu jireen.
Muddo dheer uu ka dagaalamayay Waddanka Afgaanistaan wuxuu ku dhaawacmay dagaal uu la galay qolyihii ka dagaalami jiray Afgaanistaan taas oo sababtay in uu dhaawac halis ah soo gaaro.
Waxaana loo soo qaaday waddankiisa, halkaas oo loogu sameeyay daawayn. Kolkii la daweeyay kadib waxa lagu wargashay in shaqada laga fariisiyay, wixii maanta ka dambeeyana uu yahay howlgab aan cidina wax udirsanayn.
Waxa u cuntami wayday isagoo 25 jir ah in lagu sameeyo shaqo ka fariisin. Waxa uu neceyb xoogan uqaaday islaamkii isagoo u arkay caqabad mustaqbalkiisii god ku riday. Waxa uuna go’aansaday in uu laayo dad masjid ku cibaadaysanaya. Waxa uu ku wareeray qaabkii uu udili lahaa iyo xeeladii uu isticmaali lahaa, ugu dambayn waxa uu go’aansaday in uu qarxiyo masjidka, sidaasna uga cadgoosto.
Wuxuuna go’aansaday in aysan cidna ogaan, qofna uusan dareemin qorshihiisa balse waxaa ogaatay gabadh yar uu dhalay, waxayna ku tiri Aabbe maxaad damacsantahay? Waxa uu ku yiri waxaan rabaa in aan qarxiyo masjidkaan.
Gabadhii yarayd ayaa argagaxday, kor ayay uqaylisay iyadoo leh Aabbe islaamka saad mooday ma ahan, ani ayay iskuulka ila dhigtaan saaxiibo badan baan ku leeyahay ee iskadaa ha qarxine. Dood dheer kadib waxa uu hakad geliyay qorshihiisii qarxinta. Waxa uuna go’aansaday bal in uu masjidka tago, diintaana soo arko.
Waxa uu uyimid imaamkii masjidka, wuxuuna ku dhahay waxaan rabaa in aan wax ka ogaado diintiina, imaamkii ayaa ku farxay, waana soodhaweeyay. Wuxuuna siiyay qeyb kamid quraanka wuxuuna ku dhahay soo akhriso kadib iisoo noqo.
Ninkii wuxuu qaatay kitaabkii, wuxuuna akhrinaayay muddo 3 sano ah isagoo isku dayay in uu fahmo. Waxa uuna ogaaday wax uusan malaysanayn, waxa uu arkay wax ka cajab gashay. Waxaana usoo baxday in nimanka xagjirka ah ay si khaldan u isticmaaleen diinta islaamka ah.
Wuxuuna ku noqday imaamkii, wuxuuna qaatay diinta islaamka, wuxuuna noqday imaamka masjidka Muncie Islamic Center. Waraysi uu baxshay ayuu ku sheegay in uu dareemay deganaan iyo naxariis markii uu galay islaamka, waana diinta keliya ee ku dhisan nabadgelyo. Suurad walba waxay ku bilaabanaysaa magaca Eebbe waana naxariis. Waana ku faraxsanahay in aan ahay muslim dhab ah oo khaalisa.
Fg. Sawirka hoose ma ahan ruuxa qisada ka hadlayso.
Tags: Islaam Naceybkii Iimaamka Noqday
Next post Faa'iidada ay Kuu Leedahay Inaad Noqotid Qof Naxariista
Previous post Cabsadaa Ma Guulaysto